विज्ञान प्रविधि Archives - Vishwa News
शुक्रबार पनि थामिने छैन वर्षा, कुन कुन क्षेत्रमा छ जोखिम ?
काठमाडौं । नेपालमा मनसुन लम्बिएको छ । यसले देशभर निरन्तर वर्षा समेत गराइरहेको छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि जारी वर्षा शुक्रबार समेत थामिने छैन । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रवार देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्नेछ । यसले तराईमा जलस्तर बढाउने
हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुविधा
काठमाडौं । सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले मात्र नेपालमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा गर्न पाउने गरी अनुमति पाएको थियो । सरकारले दिएको अनुमतिसँगै अब त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालयले आफ्ना जहाज र यात्रुको
कुलमानको बर्हिगमनसँगै विजुली जाने क्रम बढ्यो, मन्त्रालयलाई तनाव
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको बर्हिगमन भएको छ । सँगै नेपालमा विजुलीको आपूर्ति समेत अनियमित बनिरहेको छ । यसै त कुलमानको पुननियुक्ति माग गरिरहेक जनता सरकारप्रति रुष्ट छन् । त्यसमाथि पुनः विजुली जाने क्रम बढेसँगै उर्जा मन्त्रालयलाई भने
September 24, 2020 विस्तृतमा »
शनिबारदेखि मात्र मौसममा सुधार
काठमाडौं । बिहीबार र शुक्रबार नेपालमा अविरल वर्षा जारी रहने भएको छ । मौसममा शनिबारदेखि मात्र क्रमिक सुधारको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभाग मातहतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबारबाट भने मौसममा क्रमिक सुधारको सम्भावना
८ कात्तिकबाट क्लिन फिड लागु, विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित
काठमाडौं । ८ कात्तिकबाट नेपालमा प्रशारण हुने सबै प्रकारका विदेशी च्यानलको विज्ञापन हट्नेछ । विज्ञापन हटाउन नमिल्ने विदेशी च्यानल भने सरकारले बन्द गराउने छ । सोहीअनुसार तयारी शुरु भएको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विज्ञापन नियमन
काठमाडौं । नेपालमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा अहिले उच्च वर्षा भइरहेको छ । यसले नदी किनारका वस्तीमा क्षति पुग्ने र पहाडी भेगमा पहिरोका डर हुने भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत गराएको छ । अहिले देशभरको
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : चीनतर्फ भौगर्भिक सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल्वे आयोजनाको चीनको भूभागमा पर्ने क्षेत्रमा भौगर्भिक सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ । अध्ययन टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको अध्ययन पुरा भएको चिनियाँ संचारमाध्यमले जनाएका छन् । यो अध्ययनको निष्कर्ष के आयो भन्ने बारेमा भने खुलाइएको
अब विदेशबाट डिजिटल पेमेन्टमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाडौं । अब विदेशमा रहेका श्रमिक र नेपालीले डिजिटल पेमेन्टमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नेपाली कार्यरत रहेका देशमा सञ्चालनमा रहेका डिजिटल पमेन्ट गर्ने संस्था (डिजिटल वालेट सञ्चालक) सँग आवद्ध भई यस्तो सेवा
काठमाडौं । सल्यानका डा. महेश श्रेष्ठ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने पहिलो नेपाली बनेका छन् । उनी रुसको मस्कोमा कार्यरत छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ रुसका अनुसार उनले मस्कोमा यो खोप लगाउने अवसर पाएका हुन् । रुसमा अहिले कोरोना भाइरसको
काठमाडौं । सरकारले युट्युवसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानीलाई वैधता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अब यस्तो रकमलाई नेपालको बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने भएको छ । यसअघि यस्तो रकम आइएमईबाट आउने गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ईकमर्स लगायत
September 19, 2020 विस्तृतमा »
करेन्ट लागेर चितवनमा दुई सैनिकको ज्यान गयो
भरतपुर । चितवनमा करेन्ट लागेर दुई सैनिकको ज्यान गएको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका–८ शक्तिखोरमा रहेको सिंहनाथ गणमा रुख काट्ने क्रममा करेन्ट प्रवाह हुँदा ज्यान गएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ । कार्यालय कम्पाउण्डभित्र रहेका रुखको हाँगा काट्ने क्रममा करेन्ट
September 12, 2020 विस्तृतमा »
ह्याण्ड स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने ५ उद्योगका उत्पादनमा हानिकारक रसायन
काठमाडौं । नेपालमा ह्याण्ड स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने पाँच उद्योगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने रसायन मिसाएको फेला परेको छ । यस्तो उद्योगबाट उत्पादन भएका उत्पादन प्रयोगमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले आज उद्योगको सूचि सार्वजनिक गर्दै यस्तो
सगुनले फेरि खुलायो मिनी आइपिओ, ठूला लगानीकर्ता भित्र्याउने दावी
न्यूयोर्क नेपालीको प्रवर्धनमा अमेरिकामा खुलेको कम्पनी सगुनले दोस्रो पटक मिनी आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । प्रतिकित्ता ३० अमेरिकी डलरका दरले कम्तिमा ३० कित्ता शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ । अहिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पाँच लाख डलर हाराहारी लगानी
September 10, 2020 विस्तृतमा »
लण्डन । अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणको काम स्थगित गरेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा उत्साहजनक नतिजा आएको परीक्षण तेश्रो चरणमा पुगेपछि रोकिएको छ । बीबीसीका अनुसार परीक्षणका दौरान एक जना व्यक्ति विरामी भएपछि तत्कालका लागि